Big futhi amahle, yezwekazi lase-Afrika ngokuvamile iyavela konke ngendlela kwama-movie, imidlalo kanye nezincwadi. Cashing ku zakhona exotic lwaya iningi wonke ube nale ndawo sasendle otherworldly, muva IGT ukhiphe i-inthanethi slot umdlalo nge esindayo Afrika indaba ephathwayo. Wawubizwa ngokuthi i-Wild Life,a Slots akukho idiphozi inthanethi elibonisa ohlangothini enchanting futhi okuyimfihlakalo Afrika arhola wabahloli yi umkhumbi-umthwalo phakathi namakhulu eminyaka eyedlule. Kodwa ingabe umdlalo kufanele siwela ukulihlola? Ake sithole ukuthi kwakungani.
The Wild Life Is ukushayelwa Enchanting
Lokhu Slots akukho idiphozi inthanethi iza itolitji emihlanu ngezinhlu ezintathu. Futhi kanye, paylines ezemidlalo eziyishumi fixed. Nakuba empeleni kungenzeka onqobayo enziwa kusuka kwesokunxele kuya kwesokudla kanye noHezekeli, lokhu uhumusha esivulekile paylines amabili. I itolitji asethwe ngaphakathi luhlaka uqalo embozwe imivini ezinwabuzelayo. With savannah ejwayelekile Afrika ngesikhathi sokushona kwelanga okumangalisayo enombono spice izinto.
Amatshwayo esemqoka kule Slots akukho idiphozi inthanethi game unsurprisingly ubhejane, indlulamithi, indlovu, zebra and tiger. The ephansi ukubaluleka izimpawu K, Q, J kanye A. Kodwa namanye isitayela funky Afrika benezelwa kubo.
Uphawu zasendle Kunengonyama Ukubhonga wayeyoba kabi belulekwa ukuhlangabezana endleleni engenabantu ebusuku. Lolu phawu kungabonwa itolitji emibili kuya kwemine. Lapho kuyasiza ifomu ngokuwina combos, ke inwebeka esabekayo mayigcwalise esondweni. Ukwengeza, uzothatha indawo yabo bonke abanye izimpawu ugcine chitha. Nge chitha kokuba ibalazwe zokudala kwelivekati le-Afrika.
Ukubhonga kwengonyama Me A Ibhonasi
Amabhonasi kule Slots akukho idiphozi inthanethi umdlalo kungaba kwaphela. Kodwa zisatholakala bezijabulisa futhi zinkulu ngokwanele. Chief phakathi izici ibhonasi iyona khulula spin Imodi. Ake sibone ukuthi yini kumayelana.
osebenzisa free- mahhala spin sici Ufika isebenze kule Slots akukho idiphozi inthanethi umdlalo lapho emithathu kuze Afrika ebalazweni chitha izimpawu get lawela noma yikuphi itolitji. Usakaza amathathu lawela kulingana eziyishumi osebenzisa free. Four kulingana nanhlanu osebenzisa free kanye ezinhlanu kusho ukuthi uthola babusiswe amabili osebenzisa free.
Kule modi iyiphi chitha izimpawu kufanele ufake i ukubukeka, osebenzisa esengeziwe ezimbili zingezakho ukudlala. Futhi akufanele itolitji ujike zasendle khashana you are bo mahhala spin Imodi, izohlala ngaleyo ndlela kuze osebenzisa yakho khulula round kukhona siphelile.
Lena Slots ngokuphelele amangalisayo akukho idiphozi inthanethi umdlalo nalokho kwenele ngempela usuhamba. Nakuba kungase kube futhi elula kwabanye, kusenzima kuwufanele ukuhlola. Sporting i RTP kusukela 92.16% futhi 96.16% Ngokuqinisekile umdlalo ikhokha. Futhi izintelezi kanye.